Manomboha manomboka ny herinandro miaraka amin'ireo fifanarahana ireo amin'ny lalao sy fampiharana | Vaovao IPhone
Manomboha manomboka ny herinandro miaraka amin'ireo fifanarahana ireo amin'ny lalao sy fampiharana
Izahay dia efa nandao ny faran'ny herinandro, izay fohy loatra foana, ary androany manomboka herinandro vaovao amin'ny asa sy ny adidy isika. Fa ny dimy andro ny enti-mody eo alohanay mandra-pitenintsika hoe "Zoma ihany izao!" dia ho zaka kokoa raha manomboka ny herinandro amin'ny tongotra ankavanana isika, ary inona no fomba tsara kokoa anaovana azy noho ny amin'ny fisafidianana lalao sy fampiharana atolotra mamela antsika hitahiry vola vitsivitsy.
Efa fantatrao fa ny tolotra sy fampiroboroboana rehetra hasehonay anao eto ambany dia Fotoana voafetra, in Vaovao IPhone Tsy azontsika antoka fa tolotra izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny famoahana ity lahatsoratra ity, saingy tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no hiafara noho ny antony tsotra: tsy manao doka matetika ny mpamorona. Noho izany, raha liana amin'ny iray amin'ireto lalao na fampiharana manaraka ireto ianao dia araraoty ilay tolotra ary sintomy haingana araka izay tratra. Avy eo ianao dia hanana fotoana hanomezana lanja azy io ary, raha tsy izany no antenainao dia azonao averina foana izany ary averinao ny volanao, raha tsy maimaim-poana izany. Hanomboka ve isika?
1 Ace PhotoJus Frame Pro
3 Databit Mobile data konsum 3G / 4G / LTE widget
4 OPlayer sy OPlayer HD
5 Ilay kamiao kely sakafo
Ace PhotoJus Frame Pro dia fampiharana fakana sary mamela anao ampio mihoatra ny efapolo ny sary tsy mitovy amin'ny sarinao. Ny zavatra tsara indrindra dia ny ahafahanao manao izany amin'ny fotoana hakanao sary, ary amin'izany dia jereo ny endriny. Fa ny tsara kokoa aza dia tsy handoavana denaria iray akory ianao.
Ace PhotoJus Frame Pro Manana vidiny 2,99 euro mahazatra izy io, nefa azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Miaraka amin'ny DraftPlus azonao atao mamorona fampisehoana haingana sy mora avy amin'ny iPhone na iPad anao. Ho an'izany dia manana endrika sy fiasa maro be toy ny fampidirana latabatra sy sary, miasa miaraka amin'ny mpiara-miasa hafa, manampy sary sy lahatsoratra amin'ny pejy, fanontana, fisafidianana ny endrika sy endritsoratra, fizarana amin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny mailaka. , famolavolana atiny amin'ny alàlan'ny fenitry HTML, sy maro hafa.
DraftPlus Manana vidiny 2,99 euro mahazatra izy io, nefa izao dia azonao atao amin'ny ampahatelon'ny sanda fotsiny, 0,99 euro.
Drafitra +€ 10,99
Databit Mobile data konsum 3G / 4G / LTE widget
Araka ny azonao an-tsaina avy amin'ny anaran'ny fampiharana, ny Databit dia fampiharana izay mamela anao fantaro sy hifehezana amin'ny fomba tsotra ny fanjifanao vola amin'ny tahan'ny angon-drakitra findainaos. Sokafy fotsiny ny fampiharana na fidio avy amin'ny Widget izay atolotra azy ireo hahitanao ireo angona azo alaina amin'ny fotoana tena izy. Tsy isalasalana fa fanampiana tsara hisorohana ny sarany fanampiny.
Ampiasao amin'ny fotoana tena izy. Tsy mila miantso ny mpamatsy anao lalandava ianao.
Widget. Ny fanjifanao angona ao amin'ny Notification Center.
Ny fihinanana azy dia miverina amin'ny andro voatondroinao.
Fotoana isan'andro, isan-kerinandro ary isam-bolana.
Calibration. Alaharo ny tanana ny fampiharana raha mila izany ianao.
Famolavolana minimalista nefa tsy mahasosotra anao amin'ny fampahalalana.
Mety ho anao rehefa mizara ny Internet amin'ny alàlan'ny Hotspot ianao.
Fifanarahana Apple Watch.
Miasa ho an'ny mpamatsy rehetra
Refesina LTE, 4G, 3G, ary Edge.
Databit Fandefasana angona finday 3G / 4G / LTE widget Manana vidiny 1,99 euro mahazatra izy io, nefa azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Databit: fanjifana data€ 2,29
OPlayer sy OPlayer HD
OPlayer dia a mpilalao eo an-toerana ho an'ny iPhone sy iPad miaraka amin'ny fanohanana endrika maro. Azonao atao ny mamindra ny horonan-tsary avy amin'ny Mac na PC mankany amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny iTunes ary mankafy traikefa nahafinaritra.
OPlayer dia manohana ny endrika feno indrindra, ny rindrambaiko miorina indrindra, ny fiasa be indrindra ary ny fampiasana mora indrindra.
OPlayer Izy io dia manana kinova tsy miankina roa, na ho an'ny iPhone na iPad, samy manana ny vidiny 4,99 euro tsirairay avy, nefa izao dia azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ny fihenam-bidy 80 isan-jato amin'ny 0,99 euro fotsiny.
OPlayer - mpilalao horonantsary€ 3,49
OPlayer HD - mpilalao horonantsary€ 5,49
Ilay kamiao kely sakafo
Ary mifarana amin'ny lalao ho an'ireo ankizy kely ao an-trano izahay. Amin'ity lalao ho an'ny zazalahy sy zazavavy eo anelanelan'ny 6 sy 8 taona ity dia tsy maintsy mihodina kamiao kely izy ireo ary, rehefa avy nisafidy iray amin'ireo mpanampy efatra azo alaina, dia tokony ho azon'izy ireo antoka fa afaka mamahana ny donuts ho an'ny mpanjifa noana, alika mafana, waffles , elatra akoho ...
Kamiao kely sakafo Manana vidiny 2,99 euro mahazatra izy io, nefa azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Manomboha manomboka ny herinandro miaraka amin'ireo fifanarahana ireo amin'ny lalao sy fampiharana
Voaroaka i Sydney Apple Store noho ny fandrahonana tamin'ny baomba